Induction aruminiyamu brazing iri kuramba ichiwanda muindasitiri. Muenzaniso chaiwo ndeyekusunga mapaipi akasiyana siyana kune mota inopisa kupisa muviri. Iyo induction heat coil inoshandiswa zvakanyanya kune iyi mhando yekuita haina-kutenderedza imwe, iyo inogona kunzi se "Horseshoe-hairpin" maitiro. Kune aya makoiri, iyo yemagineti uye inokonzeresa eddy parizvino kugoverwa kune zvakasikwa 3-D mune zvakasikwa. Mune izvi zvinoshandiswa, pane matambudziko nehunhu hwakabatana uye kuenderana kwemhedzisiro kubva kuchikamu kuenda kuchikamu. Kugadzirisa rimwe dambudziko rakadai kumugadziri mukuru wemotokari, Flux3D chirongwa chekufananidza chemakomputa chakashandiswa pakuita kwacho kudzidza uye kugadzirisa. Optimization yaisanganisira kushandura iyo induction coil uye magnetic flux controller kumisikidza. Nyowani induction coils, ayo akave akaedzwa akaedzwa mu laboratori, inogadzira zvikamu zvine yepamusoro mhando majoini munzvimbo dzinoverengeka dzekugadzira.
Motokari yega yega inoda akasiyana akasiyana maanopisa (heater cores, evaporators, condensers, radiators, nezvimwewo) kuitira powertrain kutonhodza, kutonhodza kwemhepo, kutonhorera kwemafuta, nezvimwewo ruzhinji rwevapfuuri vemota inopisa zvinopisa nhasi zvakagadzirwa nealuminium kana aluminium alloys. Kunyangwe kana iyo injini imwechete ikashandiswa kune akati wandei mamodheru emota, zvinongedzo zvinogona kusiyana nekuda kwenzvimbo dzakasiyana pasi pehood. Nechikonzero ichi, zvakajairwa tsika kune vagadziri vezvikamu kuti vagadzire miviri yakati wandei yekupisa kupisa vobva vabatanidza akasiyana maunibatanidza mune yechipiri oparesheni.
Miviri yekupisa inopisa inowanzo kuve nealuminium fins, machubhu uye misoro yakasunganidzwa pamwechete muvira. Mushure mekusunga, zvinopisa kupisa zvinogadzirirwa iyo yakapihwa modhi yemota nekubatanidza matangi enylon kana anowanzo siyana mapaipi ealuminium aine mabhuroko ekubatanidza. Aya mapaipi akasungirirwa pamwe neMIG welding, murazvo kana induction brazing. Muchiitiko che brazing, chaiyo chaiyo tembiricha kudzora inodikanwa nekuda kwemusiyano mudiki mukunyungudika uye brazing tembiricha yealuminium (20-50 C zvinoenderana nesimbi, yekuzadza simbi uye mhepo), yakanyanya kupisa kupisa kwealuminium uye pfupi pfupi kune imwe majoini akasungwa mukushanda kwakapfuura.
Induction Kutya inzira yakajairika yekusimbisa mapaipi akasiyana siyana kupisa misoro yekuchinja. Mufananidzo 1 mufananidzo we kuburitsa kusungurudza set-up yekusunga pombi kune chubhu pane yekupisa musoro musoro. Nekuda kwezvinodiwa pakupisa chaiko, kumeso kweiyo induction coil inofanirwa kunge iri padyo padyo nejoinhi kuti ive brazed. Naizvozvo nyore cylindrical coil haigone kushandiswa, nekuti chikamu chacho hachikwanise kubviswa mushure mekunge mubatanidzwa wabhurungwa.
Iko kune maviri makuru induction coil masitayera anoshandiswa ku brazing aya majoini: "clamshell" uye "horseshoe-hairpin" maitiro inductors. Inductors "Clamshell" akafanana neakagadzika eindindors, asi anovhura kubvumira chikamu kubviswa. Indorsors "Horseshoe-hairpin" akaumbwa sehangu yebhiza kurodha chikamu uye anongova mairi maviri epini pamativi akatarisana ejoini.
Mukana wekushandisa "Clamshell" inductor ndeyekuti kupisa kwakanyanya muyunifomu uye zviri nyore kufungidzira. Iko kusagadzikana kwe "Clamshell" inductor ndeyekuti iyo mechina system inodikanwa yakanyanya kuomarara uye akakwirira azvino mahofisi haavimbike.
"Horseshoe-hairpin" inductors inogadzira yakaoma yakaoma 3-D kupisa maitiro kupfuura "Clamshells". Kubatsira kweiyo "Horseshoe-hairpin" dhizaini inductor ndeyekuti chikamu chinobata chakareruka.
Komputa simulation inogonesa brazing
Mugadziri mukuru wekupisa-kupisa anga aine matambudziko emhando yepamusoro nekusunga joini inoratidzwa mumufananidzo 1 achishandisa bhiza-hairpin dhizaini inductor. Iko kusunganidzwa kwebrashe kwaive kwakanakira ruzhinji rwezvikamu, asi kupisa kungave kwakasiyana zvachose kune zvimwe zvikamu, zvichikonzera kusakwana kwakabatana kwemajoini, majoini anotonhora uye simbi yekuzadza inomhanya pamadziro pombi nekuda kwekupisa kwenzvimbo. Kunyangwe nekuyedzwa kweumwe neumwe wekuchinjisa kupisa kwekudonha, zvimwe zvikamu zvichiri kuburitsa pane ino mubatanidzwa mukushandira. Center for Induction Technology Inc. yakapihwa chibvumirano chekuongorora uye kugadzirisa dambudziko.
Simba rekushandisa rinoshandiswa pabasa rine huwandu hwakawanda hwegumi kusvika pa10 kHz uye simba rakayerwa re25 kW. Mukuita kwekusunga, oparesheni anoisa yekuzadza simbi mhete pombi pombi uye anoisa pombi mukati mehubhu. Chinopisa chinopisa chinoiswa padanda rakakosha uye ndokutamisirwa mukati meye inductor yebhangu.
Iyo yese brazing nzvimbo inoiswa pamberi. Iyo frequency inoshandiswa kupisa chikamu chinowanzoita 12 kusvika 15 kHz, uye nguva yekupisa inenge masekondi makumi maviri. Iko simba remagetsi rakarongedzwa pamwe nekudzikiswa kwemitsetse panopera kudziya kutenderera. Iyo pyrometer yekumeso inodzima simba kana tembiricha iri kumashure kweshure kwejoinhi inosvika pane yakatarwa kukosha.
Pane zvinhu zvakawanda zvinogona kukonzeresa kusagadzikana kuri kugadzirwa nemugadziri, sekusiyana kwezvikamu zvekubatana (zviyero uye chinzvimbo) uye kusagadzikana uye kusiyanisa (munguva) kusangana kwemagetsi uye kupisa mukati mehubhu, pombi, yekuzadza mhete, nezvimwe. zvakasikwa zvisina kugadzikana, uye mutsauko mudiki wezvinhu izvi unogona kukonzera maitiro ekuchinja akasimba. Semuenzaniso, iyo yakavhurika yekuzadza simbi mhete inogona kudzikama zvishoma pasi pemagetsi emagetsi, uye magumo emahara eringi anogona kuyamwa kumashure nema capillary mauto kana kuramba asina kuburitswa. Ruzha zvinhu zvakaoma kudzikisa kana kubvisa, uye mhinduro yedambudziko raida kuwedzera kusimba kweiyo yakazara maitiro. Kuteedzera kwemakomputa chishandiso chinoshanda kuongorora uye kugadzirisa maitiro.
Munguva yekuongororwa kweiyo brazing maitiro, masimba akasimba emagetsi akaonekwa. Parizvino simba ravhurwa, coils yebhiza rehashi rinonyatsoona kuwedzerwa nekuda kwekushandisa kamwe kamwe kwesimba remagetsi. Nekudaro, iyo inductor yakaitwa ine michina kusimba, kusanganisira kusanganisa iyo yekuwedzera fiberglass (G10) ndiro inobatanidza iyo midzi yemaviri hairpin coils. Kumwe kuratidzira kwemasimba emagetsi aripo kwaive kuchinjika kwesimbi yakanyungudutswa kubva munzvimbo dzakapoterera nekotoni kutendeuka uko simba remagineti rakasimba. Mune maitiro akajairwa, simbi yekuzadza inogovera zvakaenzana kutenderedza mubatanidzwa nekuda kwemasimba emagetsi uye giravhiti zvichisiyana neyakajairika maitiro apo zarira simbi inogona kupera kubva mubatanidzwa kana kukwira kumusoro nepombi pamusoro.
nekuti induction aruminiyamu brazing Maitiro akaomesesa, hazvigoneke kutarisira kuenzanisa chaiko kwecheni rese rezvinhu zvakabatana (zvemagetsi, zvinopisa, zvemagetsi, hydrodynamic uye metallurgia). Iyo yakakosha uye inodzora maitiro ndiko kugadzirwa kwemagetsi ekupisa magetsi, akaongororwa achishandisa iyo Flux 3D chirongwa. Nekuda kweiyo yakaoma maitiro eiyo induction brazing maitiro, musanganiswa wemakomputa simulation uye kuyedza zvakashandiswa pakuita dhizaini uye kugadzirisa.
Categories Technologies Tags aluminium brazer, aluminium brazing, aluminium brazing maitiro, aluminium induction brazing, aluminium induction brazing hita, tenga aluminium brazer, tenga aluminium induction brazer, yakakwira frequency aluminium brazing, Induction Aluminum Brazing, Induction aluminium brazing kunyorera, induction aluminium brazing coil, induction aluminium heater Post navigation